⛵🏝️INFO njem - Kefalonia.mobi ezumike 🏝️
Emelitere ikpeazụ na February 7th, 2020 na 01:06 am
map Kefalonia Rental Cars Motorcycles Boats Studios (ụlọ) IN Kefalonia VIDEO
N'àgwàetiti Captain Corelli, Kefalonia Ọ bụ untapped ibu Ionian.
Clear mmiri na-eme ka ọ na anya dị ka oké osimiri a iko mgbatị, na ụgbọ mmiri na-ezu ike n'elu. Gbakwunye na nke a agba agba dịgasị iche iche nke obodo Kefalonia na osisi oliv ya na ugwu ya. N'ime ime akụkụ nke agwaetiti mgbe ha izute aturu na ewu wepugara nna ha ukwu na-akpapụ n'okporo ụzọ. Oge yiri ka a ga-akwụsị.
Kefalonia ọ ka bụ otu n'ime jụụ agwaetiti na obodo na obodo nta ndụ dị jụụ. Fiskardo ugwu Dell’ agwaetiti a na-jupụtara na okpomọkụ oge na nwere a pụrụ iche ikuku. Na ya Ogwe na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na pụtara echiche. Ma, e nwekwara pebbly ị na osimiri nke Lassi. Ọ bụrụ na-eleta Kefalonia Occor ewepụta otu ehihie ma ọ bụ abụọ mmụta pụrụ iche ebe, dị ka ịtụnanya beach Myrtos. Ndị ọgba nke Drogarati ma ọ bụ ọdọ nke Melissani.
ọtụtụ nke Kefalonia Ọ e bibiri 1953 site na ala ọma jijiji. Agbanyeghị na nwughari ahụ o jisiri ike mee ka ndụ onye Greek pụtara, na ọ na e efu na ọtụtụ ndị ọzọ isuo. Kefalonia Ọ bụkwa otu n'ime sunniest àgwàetiti Gris. The ịga nke ọma Nchikota surf na turf adọta ọtụtụ ndị na ebe a na Kefalonia. Ikpọ monasteries ntụpọ nkume ugwu nta na pines. Na n'ebe ugwu nke ikpọ ọnụ ọnụ ugwu na ọ bụ ihe e ji mara nke a mara mma n'ụsọ oké osimiri.
Gị Interactive map www.Kefalonia.mobi, na ịpị nrịbama ị ga-ahụ foto nke ebe, osimiri, videos, e mebere tour na 3d.
Chọta niile ozi Kefalonia a na saịtị oke maka ferries na Ulo na Kefalonia
Resorts Kefalonia ezumike
Resorts na Kefalonia gụnye Assos, Bazukata, Clikeri, Fiskardo, Katelios, Lassi, Lixouri, Lourdas, ọnụ ọgụgụ, Spartia na Svoronata.
Studios (ụlọ) IN Kefalonia
Iji hụ a nhọrọ nke Hotel, Studios, obodo, Ụlọ na Kefalonia
Anakọta 07 Jul 2022
ụlọ ụlọ Kefalonia igwefoto Kefalonia map Ụlọ mgbazinye cefalonia Kefalonia ezumike obibi cefalonia Kefalonia mgbazinye skuuta Kefalonia ụlọ Kefalonia ọnụ ala ụlọ Kefalonia osimiri Kefalonia Studio Cephalonia nka Kefalonia Videos Kefalonia Villa Kefalonia Villas gara irenti echiche aku fiscardo Fiskardo hotel hotels Kefalonia mgbazinye quad Kefalonia Video lourdas Lourdata Yachtcharters skuuta iru Kefalonia amalite ọnụ ọgụgụ Kefalonia osimiri studio nka Studios Cephalonia kefalonia ụgbọ mmiri ferries Italy kefalonia Ụdị trapeza vela Amọraịt + Amọraịt + na ọdọ mmiri Villas na Kefalonia Villas nwere ọdọ mmiri ụgbọ mmiri
© 2022 Kefalonia.mobi	| Kwadoro site na Outstandingthemes